Iindaba - EXPONOR CHILE 2019
I-Exponor, ibonisa ukuba iyenzeka e-Antofagasta-eChile qho emva kweminyaka emibini, ikhonkco lenkqubela phambili yamva nje ejolise kwicandelo lezemigodi. Ingumthombo weqhinga lolwazi kutyalo-mali lwexesha elizayo kunye nethuba lokwabelana emhlabeni kunye neenkampani kunye nababonisi.
Ummandla we-Antofagasta uzinzile njengenkunzi yezemigodi yaseChile kunye nehlabathi, njengoko inegalelo elingama-54% kwimveliso yezimbiwa zesinyithi kunye nezingezizo ezesinyithi kwilizwe liphela kunye ne-16% yemveliso yehlabathi. Ikwakhokela ipotifoliyo yeeprojekthi zezimbiwa ngexesha le-2018-2025, eligubungela i-42% yawo onke amanyathelo afikelela kwi-US $ 28,025 yezigidi, ngokweKhomishini yeCopper yaseChile, eCochilco (jonga ingxelo ngokunqakraza apha).
Okwangoku, uMmandla we-Antofagasta uzibeke njengophawu kumzi mveliso we-eneji ngokunikela nge-6,187 MW kwiNkqubo yeSizwe yoMbane (i-SEN), eqaqambisa ukuveliswa kwamandla ahlaziyekayo afikelela kwi-19% ngokusebenzisa i-photovoltaic, umoya, i-geothermal kunye nokudibana. Ipotifoliyo yeNgingqi yeAntofagasta ifikelela kwi-US $ 24,052 yezigidi, ekhokelela kuphuhliso lwamandla ahlaziyekayo (iipesenti ezingama-91 zepotifoliyo iyonke) kunye nokuba nguvulindlela kuphuhliso lobuchwephesha obufana namandla e-geothermal kunye namandla elanga (CSP).